All Ebooks :: Malagasy :: Ireo Olona Miala Aminao (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyIreo Olona Miala Aminao (E BOOK)
Ireo Olona Miala Aminao (E BOOK)
Ny olona mandao anao dia afaka ny hanimba anao.Tsy hita izay hanoritsoritana ny fahakiviana, fikorotanan-tsaina, ary tebiteby milatsaka ao aminao rehefa misy olona manalavitra anao. Nosoratana ity boky ity hanampiana anao hiady amin’ ny fahasimbana izay mitady hahazo anao rehefa mandao anao ny...
Ny olona mandao anao dia afaka ny hanimba anao.Tsy hita izay hanoritsoritana ny fahakiviana, fikorotanan-tsaina, ary tebiteby milatsaka ao aminao rehefa misy olona manalavitra anao. Nosoratana ity boky ity hanampiana anao hiady amin’ ny fahasimbana izay mitady hahazo anao rehefa mandao anao ny olona. Aoka ianao tsy ho voafitaka. Tsy mbola ianao sy ny asa fanompoanao irery no nisy nandao sy nilaozan’ ny olona. Maro no efa nisedra fahoriana tamin’io zavatra io. Satana no nikomy voalohany ary nanainga ny mpikomy rehetra izy avy eo.
Miaraka amin’ ity boky ity eny am-pelatananao no hifohazanao ka hiadivanao amin’ ireo fanahin’ ny fivadihana votsotra noho “ireo izay mandao”.